CORD oo ku baaqday in dib loo qiimeeyo Istaraatijiyadda Ciiddanka KDF ee ku sugan Somalia. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
CORD oo ku baaqday in dib loo qiimeeyo Istaraatijiyadda Ciiddanka KDF ee ku sugan Somalia.
On Mar 15, 2016 Last updated Mar 15, 2016
La-guddoomiyaha Isbahaysiga Siyaasadda CORD ee dalka Kenya, Moses Wetang’ula ayaa ugu baaqay Dowladda Kenya inay dib u qiimeyn ku samayso Hawlgala Difaac Dalkaaga “Lind Nchi” iyo Ciiddamadda Kenya ee ku sugan Somalia.
Wetang’ula ayaa hadalkaasi ka sheegay Kulan ka dhacay Degmadda Kakamega, wuxuuna xusay in loo baahan yahay in Dib-u-habayn lagu sameeyo Hawlgalka ay Ciiddanka Kenya ka wadaan Somalia.
“Waxaan doonaynaa in dib loo eego Istarataajiyadda aan ka leenahay Somalia, lana casriyeeyo Hawlgalka Linda Nchi, si loo badbaadiyo Xuduudaheenna iyo Midnimadda Kenya” ayuu yiri Wetang’ula.
Dhinaca kale, Hoggaamiyahaasi ka tirsan Isbahaysiga Mucaaradka ee CORD waxa uu ku booriyey Dowladda Kenya inay soo daabacaan magacyadda Askarta Kenyanka ee ay Alshabaab ku dileen Weerarkii bartamihii bishii Janaayo ka dhacay Deegaanka Ceel-cadde ee Gobalka Gedo.
Dowladda Kenya ayaa ka caga-jiidaysa inay si rasmi ahaan u shaaciyaan Khasaarada Ciiddankooda ka soo gaaray Weerarkii Ceel-cadde, kaasi oo lagu tilmaamo inuu ahaa Khasaarihii ugu xumaa ee Askarta Kenya hal maalin ka soo gaaray Jiidda Dagaalka.
Alshabaab waxay horey u sheegeen inay weerarkaasi ku dileen in ka badan 100-Askari, inkastoo ay Saraakiisha Milliteriga Kenya beeniyeen sheegashadaasi.
FAALLO: Puntland oo walaac ka muujisay Alshabaabka ku sii qulqulayo Deegaanadaasi.
Alshabaab geeddi ah oo gaaray Gara-cad iyo Barakaca ka socda Deegaankaasi.